Bogga ugu weyn > Oleoylethanolamide (OEA) –Bandhiga Wanaagsan ee Noloshaada
Oleoylethanolamide (OEA) –Bandhiga Wanaagsan ee Noloshaada
Iyadoo dadku aad iyo aad ugu baraarugeen faa iidooyinka ay leeyihiin Oleoylethanolamide (OEA), dalabka Oleoylethanolamide (OEA) nafaqada ayaa aad ugu kordhay suuqa. Tani waxay horseeday in shirkadaha wax soosaarka ay ku tartamaan midba midka kale inuu soo saaro kaabis tayo sare leh si uu saamiga suuqa ugala wareego. Haddii aad tahay soo saaraha kaabeyaasha caafimaadka ee qorsheynaya inaad ku biirto suuqa dheeriga ah ee Oleoylethanolamide (OEA), waa inaad hubisaa inaad heleyso budada Oleoylethanolamide (OEA) tayada ugu sareysa leh. Dhiirrigelinta maaddooyinka tayada wanaagsan waa tallaabada ugu horreysa ee lagu hubinayo guusha ganacsi kasta. Cofttek waa xirfadle wax soo saare Oleoylethanolamide (OEA) oo kaliya kaa iibiya alaabooyin wax ku ool ah suuqan wax ka badan 10 sano.
Waa maxay Oleoylethanolamide (OEA)?
Oleoylethanolamide wuxuu ka kooban yahay seddex eray: oleoyl, ethanol, iyo amide. Dantayada dartiis, waxaan ugu gudbineynaa OEA si kooban. Waxaa sidoo kale loo yaqaan oleothanolamine.
Waa xaydha ethanolamide dabiici ah oo u shaqeysa sida nidaamiyaha ku saabsan habka quudinta iyo miisaanka jirka ee dhammaan noocyada laf-dhabarka. Waa dheef-shiid kiimikaad oo ah oleic acid oo ka sameysma xiidmaha yar ee jidhka bini'aadamka. Waxay kuxirantahay soo-qaadaha 'PPAR Alpha' kaas oo gacan ka geysanaya in la xakameeyo afar arrimood: gaajo, dufanka jirka, kolestaroolka, iyo culeyska. PPAR Alpha waxaa loola jeedaa Receptor-ku-firfircooneyaha firfircoon ee loo yaqaan 'Peroxism Proliferator'.
Adeegsiga Oleoylethanolamide (OEA)
Adeegsiga OEA wuxuu ku hawlgalaa qaab istiraatiiji ah. Marka hore, waxay kordhisaa faraqa waqtiga udhaxeeya hal cunto ilaa cuntada xigta. Marka labaad, waxay ka caawineysaa yareynta isbeddelka wareegga wareega. Mar saddexaad, waxaa gacanta ku haya nafaqooyinka jira.
Saamaynta shaqo ee OEA iyo cunsurrada ka-faa'iideysteheeda waxaa la ogaaday konton sano ka hor uun. Ma jirin cilmi baaris sidan u qotodheer oo qaabeysan oo ku saabsan OEA kahor sanadka 2001. Waxay ahayd cilmibaarayaashii ka yimid Isbaanishka ee bilaabay inay wax ka bartaan OEA, oo lagu baaro jiirka si loo ogaado saameynta. Daraasadu waxay cadeysay in OEA aysan wax saameyn ah ku yeelan maskaxda laakiin waxay badali kartaa caadooyinka cunida waxayna saameyn ku leedahay dabeecada gaajada.
Qaaciddada molikuyuulku waa C2OH39NO2. Lambarka gaarka ah ee CAS waa 111-58-0. OEA waa isku darka oleic acid iyo ethanolamine. Joogitaanka dufanka hodanka ah ee ku jira qaybta sare ee xiidmaha yar ee jidhkeenna ayaa ah meesha ay ka kooban tahay isku-darka labadan qaybood oo inta badan lagu sameeyo. OEA waa isku mid waxayna la mid tahay endocannabinoid anandamide laakiin waa ka sii fiicantahay.
Qiyaasta oleoylethanolamide (oea)
Qiyaasta OEA waxaa loo qaadan karaa laba siyaabood iyadoo lagu saleynayo talada dhakhtarka:
OEA waxay qaadatay iyada oo aan wax dheeri ah oo miisaan dhimis ah
Haddii kaabsalka OEA la qaato iyada oo aan wax dheeri ah lagu kordhin dhimista markaa waad qaadan kartaa kaabsal 1 OEA ah 200mg.
OEA waxay qaadatay mid kale oo dheeri ah oo miisaan dhimis ah
Haddii kaabsolka OEA la qaato oo ay weheliso miisaan kale oo dheeri ah oo dhimista ka dib waxaad qaadan kartaa kaabsol 1 OEA oo ah 100 mg ilaa 150 mg.
Mid waa inuu qaataa kaabsalka OEA soddon daqiiqo ka hor cuntada. Tani waxay kaa ilaalin doontaa inaad sii dheregto intaad cuntada qaadanaysid sidaasna waxaad ku dambayn doontaa cunista tiro ka yar.
Waxaa intaa dheer, xitaa waad kordhin kartaa ama yareyn kartaa heerka qiyaastaada maalinlaha ah ee OEA iyadoo lagu saleynayo culeyska jirkaaga. Ka soo qaad, qof miisaankiisu yahay 150 lb wuxuu qaadanayaa kaabsalka OEA ee 100mg. Laakiin haddii qofku culeyskiisu yahay 250 lb, wuxuu qaadan karaa kaabsalka OEA oo ah 180 mg.
Ku soo iibso budada Oleoylethanolamide (OEA) budada tiro ahaan
Waxaad ka dalban kartaa amarka khadka tooska ah iibsashada budada badan ama xitaa waxaad ka iibsan kartaa dukaamada maxalliga ah ee caanka ah. Kaydintu way fududahay arrinta budada OEA. Waxaad u baahan tahay inaad ku keydiso heerkulka qolka. Laakiin, waa inuusan la xiriirin qoyaanka ama falaaraha qorraxda ee tooska ah. Marka, waxaad u baahan tahay inaad si adag ugu xirto meel qabow oo qalalan.
Adeegsiga OEAcan wuxuu kaa caawin karaa siyaabo badan! Sababtaas awgeed, aad ayaa loogu talin karaa qof walba maadaama uusan lahayn waxyeellooyin. Waxay xitaa ku kicin kartaa nolol caafimaad leh qoyskaaga dhexdiisa taasoo ka dhigaysa inaad dhammaantiin kortaan oo u dhalaalaan qaab ahaan, qaab ahaan, iyo qaddarin iyo kalsooni. Jirka oo aad ku ilaaliso kuna ilaaliso qaab ahaan, qaasatan kuwa yara cayilan, kuma ekeysiin doonto oo kaliya inaad dareento farxad laakiin sidoo kale waxay dadka kale ka dhigeysaa inay dareemaan farxad iyo isla weyni ay kugu qabaan.
OEA sidoo kale waxay kaa caawin doontaa inaad ka siidayso walaaca maskaxda kaa caawinaysa inaad aragti wanaagsan ku abuurto dadka kale maskaxdooda. Marka, halkii aad ka xumaan lahayd oo aanad faraxsanayn, waa waqtigii aad tallaabo qaadi lahayd oo aad bilaabi lahayd adeegsiga OEA waxaadna aad ula yaabi doontaa inaad aragto awooddeeda sixirka waxaadna dareemi doontaa bogsasho iyo salaaxid
Waxqabadka Oleoylethanolamide (oea)
OEA ama Oleoylethanolamide waa daawo kaa caawinaysa inaad miisaamto miisaanka, caadooyinka cunida, iyo kolestaroolka. Waa dheef-shiid kiimikaad dabiici ah. Waxay nidaamisaa dufanka jidhkaaga iyadoo kordhinaysa dheef-shiid kiimikaad ee dufanka ku jira jirkaaga. Waxay ku shaqeysaa qaab aad u xiiso badan.
Sida iyo marka aad qaadanaysid cuntada, daroogadani waxay u diri doontaa calaamadda maskaxdaada oo kaa codsan doonta inaad joojiso cunista ama aad cunto kale oo dheeri ah qaadato maadaama jirkaagu horeyba u qaatay cunto kugu filan oo uusan ubaahnayn wax intaa kabadan. Markaa, waxaad bilaabi doontaa inaad dareento inaad buuxsantay oo markaa aad joojiso cunista. Marka, si tartiib tartiib ah ayaad u sii wadataa qaadashada tiro yar markasta oo aad si joogto ah u qaadato. Sidaa darteed, mustaqbalka fog, waad awoodi kartaa inaad yareyso miisaanka si aad u weyn.
Faa'iidooyinka Oleoylethanolamide (OEA)
1. Waxay yareysaa heerka ghrelin
Ghrelin waa hormoon laga helo jirkeena oo kiciya rabitaankayaga cuntada. Waxaa la ogaaday in OEA ay gacan ka geysato yareynta heerka hoormoonka jirkeena haddii OEA-kan la maamulo.
2.Waxay yareeysaa dufanka jirka oo kordha
Cirbadani waxaa la ogaaday inay waxtar badan u leedahay yareynta dufanka jirka iyo waliba xaddiga sii kordhaya. Waxay kordhisaa saameynta dheef-shiid kiimikaadka ee mitochondria. Waxay xitaa jajabisaa qaadashada cuntada qaab wax ku ool ah waxayna sidoo kale kordhisaa heerka tamarta jirkaaga.
3.Waxay ka dhigeysaa heerka peptide yy mid hooseeya
Peptide YY waa hormoon kiciya rabitaankayaga cuntada. Cirbadaha OEA haddii la qaato waxay gacan ka geysan doontaa yareynta iyo ka dhigista heerka hoormoonka Peptide YY mid aad u hooseeya.
4.Caawino si loo xakameeyo rabitaanka cuntada
Qaadashada irbadda OEA waxay kaa caawin doontaa in la xakameeyo rabitaanka cuntada iyadoo la gaabinaayo dufanka jirkeenna. Xitaa waxay xoojineysaa gubashada dufanka ku ururay jirkeena. Sida iyo marka aad qaadanaysid cuntada, OEA waxay bilaabaysaa inay shaqeyso. Waxay kor u qaadeysaa heerka shaqadeeda isla mar ahaantaana waxay yareynaysaa heerkaaga rabitaanka cuntada adigoo u diraya calaamado maskaxda waxayna ku ogeysiineysaa inaad si buuxda u qanacsan tahay oo aadan u baahnayn wax cunto ah oo dheeraad ah oo aad cunto.
5.No waxyeelo la'aan
Ka dib markii dib loo eegay OEA, waxaa la ogaaday in qofna uusan la kulmin waxyeellooyin daran ka dib markii lagu maareeyo jirka. OEA waa oleic acid oo loo qaato inay qayb ka tahay cuntadaada caafimaad iyo nafaqada leh.
6.Saamayn togan oo ku saabsan walwalka
OEA waxay si togan u saamaysaa walwalka. Qaadashada OEA waxay kaa caawineysaa inaad maskaxdaada ka ilaaliso welwelka waxayna markaa kaa caawineysaa inaad ka ilaaliso cudurada khalkhalka walaaca.
Waxay kordhisaa hdl jirka
Waxaa jira laba nooc oo kolestarool ah oo jirkeena ku jira. Waxay kala yihiin- LDL Cholesterol iyo HDL Cholesterol. LDL waa kolestarool xun xun HDL-na waa kolestarool fiican. Qaadashada OEA waxay gacan ka geysaneysaa yareynta Kalastaroolka LDL iyo kordhinta Kalastaroolka HDL.
8.Aids ee dhismaha jirka
Jirkaaga ku dhis qaabkiisa iyo qaab dhismeedkiisa iyo dheelitirnaan ahaan waa mid ka mid ah moodooyinka ugu dambeeyay adduunka maanta. Gaar ahaan moodada ama warshadaha madadaalada ee qaabdhismeedka jirka ayaa si aad ah loo dalbadaa. Qaadashada OEA sidoo kale waxay ku caawisaa dhismaha jirka maadaama ay hoos u dhigeyso dufanka ku jira jirkaaga.
Alaab qeybiye ee Oleoylethanolamide (OEA)
Mid ayaa ka iibsan kara daroogada OEA dukaanka daroogada caanka ku ah ee aqoonta u leh ee ku yaal agagaarka goobta aad degan tahay ama xitaa waad ku iibsan kartaa adoo ka dalbaya internetka. Laakiin qofku waa inuu si aad ah uga feejignaadaa arrintan maxaa yeelay dhammaan kuwa keena daroogadani ma noqon karaan kuwo dhab ah.
Marka, markasta iska hubi sumcadda iyo aqoonta aqoonta dukaamada dawada ee internetka taasna, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad dhex marto faahfaahinta dib u eegista iibsadayaasha khibrada leh. Hubso ku xirxirida sheyga sida inay si sax ah u xiran tahay iyo in kale si looga fogaado nooc kasta oo faddarayn ah oo ka dhalan kara arrimo qatar ah oo dhinaca caafimaadka ah.
Oleoylethanolamide (oea) oo ah qaab budo ah
OEA xaaladdeedii asalka ahayd laguma helo qaab kiniinno ama kaabsul ah. Si kastaba ha noqotee, waad awoodaa budada OEA ku iibso tiro badansuuqa haddii loo baahdo. Foomkan budada ah waxaa lagu dhex daray dhammaystirka wax soo saarka adoo u sharciyeeynaya 15% OEA ama 50% OEA oleic acid. Naqshadda Cima OEA waxaa lagu hayaa inta udhaxeysa 90% ilaa 95% gaar ahaan kuwa wax iibsada ee Yurub iyo Mareykanka.
(1).Pi-Sunyer FX, Aronne LJ, Heshmati HM, Devin J, Rosenstock J. Saameynta rimonabant, xannibaadaha cannabinoid-1, ee ku saabsan miisaanka iyo sababaha halista wadnaha ee bukaanka cayilan ama cayilan: RIO-Waqooyiga Ameerika: tijaabo la xakameeyey oo la kala sooco Joornaalka Ururka Dhakhaatiirta Mareykanka. 2006; 295 (7): 761-775.
(2).Giuseppe Astarita; Bryan C. Rourke; Johnnie B. Andersen; Jin Fu; Janet H. Kim; Albert F. Bennett; James W. Hicks & Daniele Piomelli (2005-12-22). "Kordhinta xilliga dambe ee abaabulka oleoylethanolamine ee xiidmaha yar ee Burmese Python (Python molurus)". Am J Physiol Regul Isku-darka Comp Physiol. 290 (5): R1407 – R1412.
(3) Sarro-Ramirez A, Sanchez-Lopez D, Tejeda-Padron A, Frias C, Zaldivar-Rae J, Murillo-Rodriguez E. Maskaxda maskaxda iyo rabitaanka cuntada: kiiska oleoylethanolamide. Wakiilada Nidaamka neerfaha ee kiimikada daawada. 2013; 13 (1): 88–91.
(4).Safarka si loo sahamiyo eg
(5).Anandamide vs cbd: kee baa caafimaadkaaga ugu fiican? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga!
(6).Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan nicotinamide riboside chloride.
(7).Magnesium l-threonate supplements: faa'iidooyinka, qiyaasta, iyo waxyeelooyinka.
(8).Palmitoylethanolamide (digir): faa'iidooyinka, qiyaasta, isticmaalka, kaabista.
(9).6 faa iidooyinka caafimaad ee ugu wanaagsan ee supveverol supplements.
(10).5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada fosfatidylserine (ps).
(11).5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada pyrroloquinoline quinone (pqq).
(12).Kaabista nootropic ee ugu fiican alfa gpc.
(13).Kaabista da'da ee ugu wanaagsan ee nikotiinamide mononucleotide (nmn).
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa xaqiijisay in OEA ay tahay mid ka soo horjeedda TRVP1. Waxaa la muujiyey in OEA ay saameyn faa'iido leh ku leedahay caafimaadka iyadoo soo bandhigeysa xakameynta qaadashada cuntada, xaydhka beta-oksaydhka, miisaanka jidhka oo hoos u dhaca iyo saamaynta xanuunka. Baadhitaanka habka ficilku wuxuu shaaca ka qaaday in OEA ay dhaqaajiso PPAR-alpha isla markaana ay kiciso dareemaha vagal iyada oo loo marayo qalliinka 'capsaicin receptor TRPV1'. Daraasadaha daaweynta kahor waxay muujiyeen in OEA ay wali firfircoon tahay markii afka laga maamulo.
Dhawaan waxaan isticmaali jiray OEA (oleoylethanolamide) oo intaa ka sii badan oo ah agonist kale oo PPARa ah, laakiin mid ka mid ah cunsuriyada dabiiciga ah. U adeegsiga cunnada iyo luminta miisaanka maxaa yeelay waa dufanka fudud ee dufanka leh iyo xannibaadda cuncunka aan kicinta lahayn. Nasiib darrose waa mid ama xulasho kale oo loogu talagalay saameyn wax ku ool ah.